အဆိုပါ LEGO Group 10280 ပန်းပန်းစည်းထဲမှာတည်ဆောက်နိုင်သောပန်းအိုးအပါအဝင်ထည့်သွင်းစဉ်းစား
အဆိုပါ LEGO Group 10280 ပန်း Bouquet အတွက်ပန်းအိုးအပါအဝင်စဉ်းစား
04 / 02 / 2021 04 / 02 / 2021 ခရစ် Wharfe 1569 Views စာ0မှတ်ချက် 10280 ပန်းပန်းစည်း, 18 +, 92177 တစ်ပုလင်းထဲမှာသင်္ဘော, Anderson Grubb, ရုက္ခဗေဒစုဆောင်းမှု, ဒီဇိုင်နာအင်တာဗျူး, Ideas, Lego, Lego ဒီဇိုင်နာ, Lego Ideas, နည်းပညာ
၏ဒီဇိုင်နာ Lego 10280 ပန်းပန်းစည်း အဖွဲ့သည်ရုက္ခဗေဒဆိုင်ရာစုဆောင်းမှုတွင်ထည့်သွင်းတည်ဆောက်နိုင်သောပန်းအိုးတစ်ခုအပါအဝင်မူလကထည့်သွင်းစဉ်းစားကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
ရွေးချယ်မှုနှင့်အတူမကြာသေးမီကစားပွဲဝိုင်းအင်တာဗျူးစဉ်အတွင်းစကားပြော Lego ပန်ကာမီဒီယာ (အပါအဝင်) Brick Fanatics), Anderson Grubb သည်ပန်းစည်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုရောင်ပြန်ဟပ်သည်။ အုတ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောပန်းအိုးနှင့် 'လှပသော' အဆောက်အအုံနည်းပညာအပါအ ၀ င်ဖြတ်တောက်ခြင်းကိုမပြုလုပ်သောအရာများ။
ဒီဇိုင်နာ၏အမြင်အာရုံဆိုင်ရာအဖြေများကိုဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ။ အကယ်၍ သင်မရှိသေးပါကမည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုစစ်ဆေးပါ Lego Group က ဘယ်ပန်းတွေထည့်သွင်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်, အ အကြီးမားဆုံးဒီဇိုင်းစိန်ခေါ်မှုများ မော်ဒယ်ကိုအတူတကွထားတယ်၊ အဘယ်ကြောင့်အစုံရဲ့နှင်းဆီပန်းအနီရောင်မဟုတ်ကြဘူးနှင့်ဒီဇိုင်းအဖွဲ့ကိုဘယ်လိုခွင့်ပြုခဲ့သလဲ Technic element တစ်ခုကိုပြန်လည်အရောင်တင်ရန်အထူးခွင့်ပြုချက် ဘို့ 10280 ပန်းပန်းစည်း.
သူတို့ကိုဘယ်လိုအတူတကွကိုင်တွယ်မလဲဆိုတာဖြစ်နိုင်ချေအနည်းငယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ခံစားမှုမျိုးကိုမပြုခဲ့ဘူး၊ ဒါ့အပြင်လူတွေကိုအက်ပီအဖြစ်ကန့်သတ်သလိုမျိုးမခံစားရဘူးarticular အစီအစဉ်။ လူတွေကိုမင်းတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပန်းစည်းကိုစီစဉ်ခြင်းကနေလွတ်မြောက်ခွင့်ရစေချင်တယ်။ [ဒီတော့] အဲဒီအကြောင်းကိုစဉ်းစားမိပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာတော့မင်းတို့သူတို့ကိုဘယ်လိုစီစဉ်ရမယ်ဆိုတာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးလို့ငါတို့ထင်ခဲ့တယ်။
ဒါကိုနည်းနည်းလောက်ကြည့်ပြီးမတူကွဲပြားတဲ့ပန်းအိုးတွေလုပ်ဖို့စူးစမ်းခဲ့တယ်။ လမ်းညွှန်မူတစ်ခုဖြစ်သည့်အရာတစ်ခုမှာ 'လူတွေကိုကျွန်ုပ်တို့ဘယ်လိုအံ့သြသွားအောင်လုပ်နိုင်တာလဲ' ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တွင်၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ သီအိုရီအမြောက်အများရှိသည်၊ သို့သော်မည်သည့်အကြောင်းပြချက်ဖြင့်မဆိုဆောက်လုပ်ထားသည့်ပန်းအိုးများ၌ကျွန်ုပ်တို့၏ပန်းပုပုံစံကိုသူတို့ရိုးရိုးရှင်းရှင်း၊ ကြော့ရှင်းစွာအလှဆင်ထားသည်ဖြစ်စေ၊ အဆောက်အအုံပတ်လည်ရှိပန်းအိုးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဖြစ်စေ၊ ရေအိုးများကဲ့သို့အလွန်ရိုးရှင်းသောအရာများတွင်လူများက 'Wow' နှင့်အတူမှော်ကိုပိုမိုတုံ့ပြန်ကြသည် Lego'' ဒါကြောင့်ပုံမှန်ပန်းအိုး၌တည်ရှိ၏အခါ။ ထုတ်ကုန်ကသင့်ကိုအံ့အားသင့်စေတယ်ဆိုတာတကယ်ကိုတကယ်ကိုကူညီပေးနေတာကျွန်တော်တို့သိခဲ့တာပါ။
လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စုဆောင်းမှုထဲကအံ့သြဖွယ်ထုံးစံအတိုင်းပန်းအိုးတွေတည်ဆောက်ပြီးသူတို့ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုပြသဖို့နည်းလမ်းအသစ်တွေရှာဖွေတာတွေ့ခဲ့ရပြီ။ ယခုငါအသုံးပြု။ စူးစမ်းလူတွေရှိပါတယ်ငါသိ၏ 92177 တစ်ပုလင်းထဲမှာသင်္ဘော မှ Lego Ideas သို့ ပန်းအိုးတစ်ခုလုပ်ပါ။ ငါတီထွင်ဖန်တီးမှုကိုချီးကျူးပါတယ်၊ လူတွေကဘာလုပ်နေကြလဲဆိုတာကိုငါကြည့်ရတာနှစ်သက်တယ်။ ဒါကြောင့်လမ်းမှားမရှိဘူး ဒါပေမယ့်ငါတို့အတွက်တော့ 'ပန်းတွေကိုတကယ်ပဲအပြည့်အဝဖန်တီးဖို့အာရုံစိုက်ကြစို့၊ အဲဒီမှာပန်းအိုးတစ်ခုထဲမှာထိုင်နေတာကိုမြင်ရင်လူအများနှစ်ဆလုပ်ခိုင်း'
ငါတို့ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သမျှအလှပဆုံး၊ ကောင်းတဲ့အပိုင်းအစတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့စူးစမ်းလေ့လာတဲ့အရာတွေရှိတယ်၊ ငါတို့ကန့်သတ်ချက်တွေနဲ့မကိုက်ညီနိုင်ဘူး။ ငါတို့တွေပြန်လာပြီးမင်းတို့ယောက်ျားတွေအတွက်လုပ်ဖို့အခွင့်အရေးရမယ်လို့တကယ်မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့လူတွေသွားကြလိမ့်မယ်လို့ငါထင်တယ်၊ ဒါပေါ့!' အဲဒီအကြောင်းကျွန်တော်ပြောနိုင်တာပါ။
10280 ပန်းပန်းစည်း ယခုမှာရရှိနိုင်ပါသည် LEGO.com။ သင်၏inရိယာအတွင်းရှိယာယီကုန်ပစ္စည်းဖြစ်ပါကကျွန်ုပ်တို့ထံစာရင်းသွင်းပါ ယူကေသို့မဟုတ်အမေရိကန်စတော့ရှယ်ယာသတိပေးချက်များ နောက်ပြန်ရောက်ရင်သင့်ကိုငါတို့အသိပေးလိမ့်မယ်။
← 34 Lego Ideas စံချိန်တင်ချိုးဖောက်မှုပြန်လည်သုံးသပ်အတွက်ပယ်ချစီမံကိန်းများ
LEGO Collectible Minifigures Series 21 vignettes - Paddle Surfer →